कहिले आउला बजारमा ?
आखिर भारतलाई झुकाएरै छाडे ओलीले, इतिहासले गर्न नसकेको बहस सुरु भयो
२२ चैत काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले अनलाईन खाता खोलि पहिलो मोबाइल बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा रु ५०० सम्म रकम फिर्ता दिने भएको छ । एन आई सी एशिया बैंकको आधिकारीक वेवसाइटमा गई ग्राहकले १० मिनेट भित्रै सजिलै निःशुल्क अनलाईन खाता खोल्न सक्नेछन् । खाता खालेपछि प्राप्त खाता नम्बरको आधारमा ग्राहकले बैंकमा रहेको रकम स्थानान्तरण तथा अन्तर बैंक रकम स्थानान्तरण लगायतका विभिन्न कारोबार गर्न सक्नेछन् । अनलाईन खोलिएको खातामा
दुष्प्रचारका पछि नलाग्न इसेवाको आग्रह,समाचार हटाइएको भनिएको अनलाइन पोर्टलसँग कुनै सम्बन्ध छैन
विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसक्यो : आईएमएफ
भारतको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ९सीएसआईआर०बाट मान्यता प्राप्त जिनोमिक तथा समवेत जीव विज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) का वैज्ञानिकहरुले पेपर स्ट्रिपमा आधारित परीक्षण किटको विकास गरेका हुन । यो किटबाट कमभन्दा कम समयमा कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन । आईजीआइबीका वैज्ञानिक डा। सौविक मैती र डा। देशज्योति चक्रवर्तीले नेतृत्व गरेको टोलीले विकास गरेको यो
२३ चैत, काठमाडौं । विश्वभर महामारी निम्त्याएको कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या १२ लाख नाघेको छ । वल्र्ड मिटरको तथ्यांकअनुसार, संक्रमितको संख्या १२ लाख भन्दा बढि मानिस संक्रमित भएका छन् । यो भाइरसका कारण हालसम्म ६४ हजार ७ सय २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरसको कारण अमेरिका सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा तीन लाख ११ हजार मानिसमा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
२२ चैत, काठमाडौं । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ मा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतामाथि छुरा प्रहार भएको छ । ‘लकडाउन’ उल्लंघन रोक्न खोज्दा नेता दिलिप तामाङमाथि छुरा प्रहार भएको हो । कांग्रेसका पूर्वक्षेत्रीय सदस्य समेत रहेका ६५ वर्षीय तामाङमाथि शुक्रबार साँझ ७ बजेतिर छुरा प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
२२ चैत, काठमाडौं । आन्तरिक विवाद वढ्दै गएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को सचिवालय बैठक डाक्न दवाव परेको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदलगायतका बिषयमा धमाधम पार्टीका नेताहरु मुछिन थालेपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको सचिवालय बैठक डाक्न अध्यक्षद्धयसँग माग गरेका छन् ।
देउवाको प्रश्न– मेडिकल सामग्री खरिद अनियमितताको अनुसन्धानमा ढिलाइ किन ?
२१ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाहीमा किन ढिलाइ गरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न खडा गरेका छन्। शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै देउवाले अनियमिततामाथि अनुसन्धान थाल्न ढिलो गरी सरकारले उक्त घटनालाई ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले निराश नहुन भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर यो एक वर्षको अवधिमा जनतामा केही नैराश्य अवश्य देखिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रतिपक्षी दलले झैं सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । संसदमै सत्तापक्षका सांसदहरूबीच सरकारका कामबारबाहीबारे असन्तुष्टि पोखिने गरेको छ । अर्कातिर पार्टी एकतामा पूर्वएमाले र नेकपा माओवादीबीच भागबन्डा मिले पनि पूर्वएमाले गुटमा भागबन्डा नमिल्दा समानान्तर कमिटी बनाउने
११ फागुन, काठमाडौं । तेह्रथुमको इवामा बिसं २००८ फागुन ११ मा जन्मेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज (शनिबार) जन्मदिन हो। उनी आज ६८ औँ बर्षमा प्रवेश गरेका छन्। बिसं २०२८–२९ को झापा संघर्षमा सहभागी, १४ बर्ष जेलजीवन, ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनबाहेक ०४८ यताका सबै निर्वाचनहरुमा झापाबाट विजयी, मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वको सरकार (२०५१–०५२) मा गृहमन्त्री, ०६३ मा उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री, अनि २०७२–०७३ र अहिले गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री बने। नेकपाको अध्यक्ष, नेकपा बन्नुअघि तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष। यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक विगतबारे सायद धेरैलाई उतिसाह्रो जानकारी छैन।
विश्वभर नै कलाकारलाई सम्मान गरिन्छ। खासगरी कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भनी सम्मान व्यक्त गरिन्छ । गहना यस्तो आभूषण हो, जसले शोभा बढाउने काम गर्छ। त्यसैले विश्वमा गहना बनाउने धातु सबैभन्दा महंगा छन् । कलाकारलाई समाजको ऐनाको रुपमा पनि परिभाषित गरिन्छ । अर्थात कलाकार जसरी प्रस्तुत हुन्छन् समाज पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ । अहिले नेपाली बजारमा एक जना नायिका आँचल शर्माको खुबै चर्चा चुलिएको छ ।
​मोदी र केपीको गफ
(मोदी र केपी चिया खादै कुराकानी गर्दै गर्दा यतिकैमा मोदीले भने)
मोदीः हाम्रो देशका जनताहरु त घाममा गएर बस्न थाल्या छन् नि ।
केपीः घाममा कसरी ?
मोदी : घाममा हैन के घाम भन्दा तल..
केपी : हाम्रो तिरका जनताहरुले त झन नाकले भात खान थाल्या छन् ।
मोदीः नाकले कसरी खान्छन् ?
७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेसँगै घरबाहिर निस्कन डराउने धेरै छन् । बिना काम घरबाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्क (मुखावरण) को प्रयोग गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । घरबाहिर निस्किँदा के गर्ने ?प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भने कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरे पनि निको हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमितलाई भेट्न जाँदा, उपचार गर्दा वा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा जाँदा एन–९५ मास्क अनिवार्य रुपले
माछा यौनशक्ती बढाउने देखि हृदयाघातबाट बचाउने सम्म
२२ चैत, काठमाडौं । इटालीको शीर्ष लिग सिरी ए र कोपा इटालियालगायत सबै खेल अनिश्चितकालका लागी स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक फैलिएकाले इटालीमा खेलकुदका कार्यक्रम स्थगित गरिएका हुन्। इटालीका सिरी ए क्लब र इटालियन प्लेयर एसोसिएसनको संयुक्त बैठकले सिरी एलाई अनिश्चितकालका लागि रोक्ने कुरामा सहमति जनाएका हुन्।
कोरोनाका कारण स्पेनमा फुटबल प्रशिक्षक फ्रान्सिस्को गार्सियाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्सिस्को गार्सियाले मालागामा आधारित क्लब एटलेटिको पोर्टडा अल्टाको कनिष्ठ टोलीको प्रबन्ध गरेका थिए।
कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा फेसबुकले साथ दिने
कोरोना भाइरस सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिने जनचेतनामूलक विज्ञापनहरुका लागि सोसल मिडिया साइट फेसबुकले पैसा नलिने भएको छ । कम्पनीका सिइओ मार्क जुकरबर्गले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा विश्व
उत्तेजक कपडामा फेसबुक लाइभ गर्न नपाइने
उत्तेजक पहिरनमा फेसबुक लाइभ गर्न कम्बोडिया सरकारले रोक लगाएको छ । कपडा तथा ब्युटी प्रडक्टहरूको प्रचार तथा बिक्रीका लागि उत्तेजक कपडा लगाएका युवतीहरू फेसबुकमा आएर लाइभ गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेपछि कम्बोडिया सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कोरोनाको त्रासमा पनि रोकिएन विवाह, भिडियो कलबाट लगनगाँठो कसियो
१२ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि अहिले विश्‍वभर २ अर्ब जनसंख्या घरभित्रै बन्धक बनेको छ। भारतमा सबैभन्दा धेरै मानिस घरमा थुनिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार मात्रै २१ दिन लामो लकडाउन घोषणा गरेका छन्। यस्तोमा भारतमा एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या घरमै बन्दी बनेको छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिन भारतका विभिन्न राज्यमा लकडाउन चलिरहेकै बेला सोमवार बिहारको पटनामा एक अनौठो बिहे भएको छ।
कोरोनाको कारण डिभोर्स ह्वात्तै बढ्यो
६ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले संसारभर अनेक समस्या निम्त्याएको छ । खासगरी विश्व अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर निम्त्याउने धेरैको अनुमान छ । तर अनपेक्षित रुपमा चीनमा ‘डिभोर्स’का घटना समेत बढ्न थालेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।चिनियाँ मिडियाका अनुसार पछिल्लो केही सातादेखि डिभोर्स आवेदन दिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । चीनको छिआन सहरमा केही सातादेखि डिभोर्स गर्नेहरुको संख्या बढेको ग्लोबल टाइम्सले रिपोर्ट तयार पारेको छ । छिआनका विवाह दर्ता गराउने कार्यालयहरुमा केही हप्तादेखि नै डिभोर्स गराउन निवेदन
६ चैत, काठमाडौं । कोरोनाले विश्व आतंकित भइरहेको बेला क्क्यानडेली ‘पोर्नसाइट’ कम्पनी पोर्नहबले इटाली, फ्रान्स र स्पेनका नागरिकलाई एक महिनासम्म सित्तैमा प्रिमियम भिडियो हेर्न दिने घोषणा गरेको छ। ‘यो बेला घरबाट निस्कने होइन,’ पोर्नहबलाई उद्धृत गर्दै बेलायती सञ्चारमाध्यमले भनेका छन्, ‘घरमा एक्लै कसरी बस्नु ? यसको विकल्पका रूपमा हामीले हाम्रो प्रिमियम सेवा सित्तैमा दिने निर्णय गरेका हौं। यसले क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकको जीवनमा खुसी ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं।’
साउदी अरबमा नेपालीलाई आवतजावतमा रोक, बिदामा नेपाल आएकाको रोजगार गुम्ने डर
साउदी अरेबिया सरकारले नयाँसहित नेपालमा बिदामा आउने र बिदा मनाएर फर्कने नेपालीलाई रोक लगाएको छ । आइतबारबाट साउदी अरब सरकारले २ हप्ताका लागि आवतजावतमा रोक लगाएको हो ।
कोरियामा कोरोनाको महामारी, नेपाली कामदार त्रासमा
दक्षिण कोरियामा एकै दिनमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएका मानिसको संख्या दुईगुना बढेको छ । शुक्रबारसम्म २०४ व्यक्तिमा कोभिड–१९ भनिने उक्त भाइरसको संक्रमण पुष्टि गरेको दक्षिण कोरियामा थप २२९ जनामा भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
मलेसियाको गृह मन्त्रालयले विदेशी सुरक्षा गार्डमा नेपाली कामदारमात्रै राख्न सकिने बताएको छ । मलेसियाका लागि पाकिस्तानबाट १ लाख ५० हजार जना सुरक्षा गार्ड ल्याउने तयारीबारे समाचारहरू
ईमेल : news.newssewa@gmail.com